I-Chinese magnolia vine is liana ekhuphukayo ekhuphukayo. Izithelo zalesi sitshalo yizivuno ezidliwayo . I-Schizandra ihlukaniswa nezitshalo eziningi hhayi kuphela ngobuhle bayo obungavamile. Unayo izimfanelo zokuphulukisa ezibalulekile.
I-Schisandra isiShayina iyaziwa ngabalimi. Kodwa-ke, akubona wonke umuntu owaziyo ngempahla yakhe yokuphulukisa emangalisayo. Njengamanje, ososayensi baye bafakazela ukuthi sonke isitshalo sinomphumela wokwelapha. Ngesikhathi esifanayo, ingxenye ngayinye yayo iyasiza emzimbeni wethu.
E-China, amajikijolo e-lemongrass abizwa ngokuthi izithelo zokuthandwa ezinhlanu. Kukhona incazelo yalokhu. Isikhumba sezithelo zalesi sitshalo sinomusa omuhle futhi usawoti, ijusi lika-pulp limile kakhulu, futhi imbewu iyinhlayiya futhi iyashisa.
Unama-Chinese magnolia-tree contraindications. Akukhuthazwa iziguli ezinokungaboni ngaso sonke isikhathi izinto ezikuwo. Abantu abanokunyuka kwesimiso sezinzwa, ukukhubazeka komzimba nomfutho wegazi ophakeme kumele bangadli amajikijolo e-lemongrass. Ngaphezu kwalokho, izithelo zalesi sitshalo azinconywa izingane kuze kube seminyaka eyishumi nambili. I-Chinese Schizandra ayifanele ukuthatha kusihlwa, ngemuva kwamahora ayisishiyagalombili. Ngaphandle kwalokho, ubusuku bungaba ngaphandle kokulala.
I-Lemongrass isiShayina, indawo yokwelashwa okuyiyo ngenxa yokubunjwa kwayo okucebile, iqukethe isitashi ne-fibre, ushukela, kanye nezakhi ezihlukahlukene ze-macro (i-zinc ne-magnesium, i-chromium ne-aluminium, i-calcium ne-selenium, ithusi ne-iodine ne-potassium). Azikho izakhi ezinobuthi ezitshalweni zezitshalo ezitholakalayo.
I-Schisandra Chinese, indawo yokwelapha eyenza ukwanda komsebenzi we-reflex wesistimu yezinzwa eziphakathi, kufakwe emalungiselelweni okwenziwe okwamanje. Lezi zihlanganisa i- "Antienureuse", "Bisk", "Super Shield", njll................................................... Amalungiselelo lapho isi-Chinese lemongrass ekhona khona sivuselela imisipha yenhliziyo.
I-Schisandra isiShayina, imithi yokwelapha enganikeza umphumela wokuqabula nomzimba onomzimba womuntu, kunconywa ukuba usebenzise enkambweni yokusebenza kanzima, ikakhulukazi edinga ukunakekelwa, ukuhlushwa kanye nobuqotho bokubona. Ukudla kwezidakamizwa, okubandakanya ukulimala, kunomthelela ekukhuleni okubonakalayo. Lokhu kuthuthukisa ikhono lamehlo ukubona kusihlwa. Izithelo zezitshalo zokwelapha, ezifakwe ekubunjweni kwemithi, zinganciphisa imvamisa yezingqinamba zezinsizwa zenhliziyo, ngenkathi zandisa ukuphakama kwayo.
I-Schisandra isiShayina, okwakhiwa ukuthi izifo zokwelapha zaziwa njengasekupheleni kwekhulu le-5, zingasetshenziswa ngabantu abanobuhle. Umphumela we-tonic wezidakamizwa oqukethe lesi sitshalo sezokwelapha usetshenziselwa ukukhishwa ngokweqile nokukhathala, ukuphelelwa amandla ngokweqile nokunciphisa ukusebenza kahle, kanye nasekuseni kwe- spring avitaminosis.
Isihlahla samavini esiShayina, imithi yokwelapha ehlanganiswa kakhulu, kunconywa iziguli ze-hypotension, kanye neziguli ezine-psychasthenia. Ukuphulukisa isitshalo kuthuthukisa umsebenzi we-secretory and motor we-digestive tract. Kuyasiza futhi kulabo abanesifo sikashukela. I-Schisandra isiShayina ikhuthaza ukwehla kwamazinga kashukela egazini. Ngaphezu kwalokho, isitshalo sokwelapha sandisa ukuzivikela, senza izinqubo zokuvuselelwa kanye nokusetshenziselwa umzimba. Amalungiselelo aqukethe umvini wase-Chinese we-magnolia angakhuphula amandla, ngenkathi evuselela umsebenzi wezocansi.
Amapaki Petersburg: weminyaka engu 300th, Victory, u-Alexander nabanye